808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode Laser ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > 808nm 100W Multi-mode ကို LD ဖိုင်ဘာ coupled Diode လေဆာ
808nm 100W Multi-mode ကို LD ဖိုင်ဘာ coupled Diode လေဆာ
808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode Laser သည်မြင့်မားသော output ပါဝါနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်မြင့်မားသောနားချင်းဆက်မှီခြင်းထိရောက်မှုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ၁၀၀W ရှိပြီး 808nm laser diode သည်ပြင်းထန်ပြီး CW လေဆာရောင်ခြည်သည်လေဆာရောင်ခြည်လွှတ်ခြင်းအရင်းအမြစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Diode Laser 808nm 100W Multi-mode LD Fiber ၏ ၁။ အကျဉ်းချုပ်
808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode Laser ၏ ၂။ နိဒါန်း
808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode Laser ၏ 3. ထူးခြားချက်များ
100W output ကိုပါဝါ;
0.22NA Fiber 200 / 220Î¼m;
Diode Laser ၏ 808nm 100W Multi-mode LD Fiber ကိုအသုံးပြုခြင်း
808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode Laser ၏ 5. Electro-Optical Charactericals (T = 25âƒ) ။
operating output ကိုပါဝါ Pout - 100 - W
ရရှိနိုင်သည့်လှိုင်းအလျား၏အတိုင်းအတာ λ 805 808 811 nm
ရောင်စဉ်တန်း width ကို FWHM @ Î” Î» - 4.0 - nm
လက်ရှိ Threshold ဟုတ်တယ် - 1.0 1.5 A
Pout မှာလက်ရှိလည်ပတ် IOP - 9.5 10.0 A
Pout တွင်လည်ပတ်နေသောဗို့အား VOP - 27.0 - V
ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု - - 40 - %
လှိုင်းအလျားအပူချိန်ကိန်း Î "Î» / Î" T က - 0.3 - nm / â
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု η - 13.0 - W / A
ဖိုင်ဘာကွေးအချင်းဝက် r 37.5 - - မီလီမီတာ
ဖိုင်ဘာ core ကို / ဝတ်အချင်း DCOR - 200/220 - μm / μm
ဖိုင်ဘာကြားခံအချင်း DBUF - 320 - µm
ဖိုင်ဘာကိန်းဂဏန်း aperture NA - 0.22 - -
Beam ကိုကိန်းဂဏန်းအကျယ် (၉၀% ပါဝါ) NA - 0.18 - -
အမျှင်အရှည် Lf - 1.5 - m
Connector အမျိုးအစား - တရားမဝင်သောသို့မဟုတ် SMA905 -
Diode Laser ၏ 808nm 100W Multi-mode LD Fiber ၏ 6. ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
၇၀၈၈၈ မီလီမီတာ 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode Laser ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့မှာ 793nm 808nm 915nm 975nm laser diode ရှိတယ်။
hot Tags:: 808nm 100W Multi-mode LD Fiber Coupled Diode Laser၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်သည်၊
450nm 20W Multimode Pigtailed လေဆာ Diode
450nm 60W Bule Fiber သည် Diode Laser ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်
760nm 2W အရည်အသွေးမြင့် Fiber Laser Diode LD
785nm 2W Unololed Multimode Laser Diode Module